Musharraxii 1-aad ee madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo is shaaciyey!!! - Caasimada Online
Home Warar Musharraxii 1-aad ee madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo is shaaciyey!!!
Musharraxii 1-aad ee madaxweynaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo is shaaciyey!!!
Muqdisho (Caasimada Online) – Musharixii ugu horeeyay ee u taagan madaxweyne inuu ka noqdo maamulka loo dhisayo gobolada Sh/dhexe iyo Hiiraan ayaa ku dhawaaqay inuu xilkaasi u taagan yahay, inkastoo shirku aanu weli furmin, isla markaana aan lagu heshiin halka gogosha la dhigayo.
Shir ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay kasoo qeyb galeen Siyaasiin, Odayaal iyo Haween oo kasoo jeeda Gobolka Hiiraan ayuu kaga dhawaaqay Murashax C/raxmaan Xuseen Caddoow (C/raxmaan yare) inuu u tartamayo xilka Madaxweyne ee Maamulka loo dhisayo Gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Musharaxan oo khudbad ka jeediyay shir taageerayaashiisa isugu yimaadeen ayuu balanqaaday inuu doonayo isbedel amni iyo mid nololeed ka sameeyo Gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, isagoo caddeeyay inuu xilkan isku soo taago inay ku timid la-tashiyo uu Bulshada Gobolladaas la sameeyay.